Wenza umsebenzi ube lula kubalimi ngebhizinisi lokudiliva imikhiqizo yabo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNkk uPhumzile Chifunyise, umsunguli we-The Crop Box
UKUCWANINGA nokuqonda kabanzi ngezingqinamba ezibhekana nabalimi nsuku zonke ngezinye zezizathu ezenza waqala ibhizinisi elisiza abalimi.
UNkk uPhumzile Chifunyise oneminyaka ewu-34, ungumphathi we-The Crop Box, okuyibhizinisi eligxile ekudiliveni imikhiqizo yabalimi kumakhasimende abo kalula nangendlela ephephile.
UNkk uChifunyise ungowaseHammanskraal, eGauteng. Uqede umatikuletsheni eGlen High School ngo-2005 ngaphambi kokwedlulela e-University of Johannesburg (i-UJ), lapho ephothule khona iziqu zobuntatheli ngo-2009.
Ngaphambi kokuqala i-The Crop Box ayisungule ngonyaka odlule, ubeyintatheli kwi-UJ FM ngo-2007 nakwiYFM ngo-2008. Kusukela ngo-2010 udlulele ezinkampanini okungesizo ezezindaba, nokuyilapho ezuze khona ulwazi oluningi ngokuphathwa kwamabhizinisi.
Isivuno sezithelo namaveji se-The Crop Box
Uthi ukuqonda ngobunzima obubhekana nabalimi ekusabalaliseni imikhiqizo yabo yikona okumfikisele ngomcabango walolu hlobo lwebhizinisi.
“Izingqinamba ezibhekana nabalimi abasafufusa nsuku zonke ezinjengokusabalalisa imikhiqizo yabo, ngezinye zezizathu ezingenze ngasungula i-The Crop Box ngenkathi kusanda kuhlasela iCOVID-19 kuleli zwe nyakenye,” kuchaza uNkk uChifunyise.
Uthe okwamanje basasebenzisana kakhulu nabalimi baseKrugersdorp, eNorth West, namaphethelo.
“Siphinde sisebenzisane kahle kakhulu nezitolo ezincane zasendaweni, izinhlangano ezisebenza ngokungabheki inzuzo namakhasimende ethu (okungabalimi nabathengi bemikhiqizo yabo),” kusho uNkk uChifunyise.
Uthe ukumba eqolo kwezinsiza kusebenza, ukusokolela amakhasimende nokuguquguquka kwesimo sezulu ngezinye zezingqinamba abhekana nazo kuleli bhizinisi.
Uthi okwenza i-The Crop Box yehluke kwamanye amabhizinisi wukuthi babeka phambili ukubaluleka kwamakhasimende abo abawahambisela imikhiqizo yabo. Uthe uma sebediliva akupheli izinsuku ezinhlanu umkhiqizo ungafikile kulelo khasimende elisuke liwu-odile.
UNkk uChifunyise nekhasimende elijabulile
Babiza kusukela kuR400 ibhokisi lomkhiqizo ngamunye bese kuncika ekutheni ikhasimende lifake i-oda lomkhiqizo ongakanani. Uthi ngaleli bhizinisi akagcini ngokwenza impilo yabalimi ibe lula kuphela kodwa uphinde asize nabantu abangasebenzi.
“Sengisebenze nabalimi abaningi futhi ngiphinde ngisebenze nabantu abangisiza ekutheni sidilive imikhiqizo yamakhasimende ngokushesha, ngaleyo ndlela ngikwazi ukufaka isandla ekulweni nokuntuleka kwemisebenzi,” kusho yena.
Unxuse abafisa ukungena kwazamabhizinisi ukuthi bakulungele ukusebenza kanzima ukuze bazuze lokho abakufunayo.
“Kumele uqonde ukuthi kwenzekani ebhizinisini uzibambele konke mathupha, wakhe ubudlelwano obuhle namanye amakhasimende bese usebenzisa nezinkundla zokuxhumana ukumaketha ibhizinisini lakho,” kucebisa uNkk uChifunyise.
Uthe esinye isifiso sakhe wukuthi naye agcine esenomkhiqizo wezolimo ukuze akhulise ibhizinisi lakhe.
“Ngifuna ukuthi ngigcine sengizenzela owami umkhiqizo ngibe nezinsiza kusebenza ezanele ukudiliva imikhiqizo yami neyabanye abalimi,” kuphetha uNkk uChifunyise.
Facebook: Phumzile Chifunyise